Audrina Patridge 'asvika' kune 'Hills' nyeredzi Justin Bobby - Nhau
Kuru Style Blog Macelebs Nhau
Audrina Patridge 'asvika' kune 'Makomo' mukomana Justin Bobby
Igore ripi zvakadaro? Audrina Patridge uye Justin Bobby Brescia nguva pfupi yadarika akavhura tambo yekutaurirana mushure mekunge 'asvika' kwaari achimutevera yakakamurwa naCorey Bohan .
Pacific Coast Nhau
Iye murume anozivikanwa saJustin Bobby pa 'The Hills' akaburitsa nhau kuReality Life naKate Casey podcast munaGunyana 28.
tsvuku johansson vane vana vangani
'Ndiri kutaura chaizvo naAudrina izvozvi,' akadaro Justin Bobby. 'Tiri kutaura nekuti ndakataura nezvake, iwe unoziva, chii chaiitika nekurambana kwake. Akanga asvika kwandiri uye akaita seakanditenda nekungova akanaka uye shamwari yechinhu chose. '
sei vanessa hudgens akarasikirwa nehuremu
Audrina, Justin Bobby's chaiye musikana wepaTV wekare, achangobva kumhan'arira kurambana kubva kumurume wake asingasviki gore, achipomera mhirizhonga yemupfungwa neyemuviri. Vachuchisi vakasarudza kusaenderera mberi nenyaya yakanangana neBMX pro.
Iyo vachirwa vaviri mugove wemwedzi gumi nemashanu mwanasikana Kirra .
Pasina nguva mushure mekunge Audrina aendesa kurambana, Justin Bobby akaudza E! Nhau , 'Kuita kwangu kwekutanga kufunga kwemwana, zviri pachena. Ini, ndichibva kumhuri yakaparadzaniswa pazera diki, yaive nezvinodiwa uye yaive nezvipingamupinyi. Pfungwa yangu yechipiri ndeyekuti ari mushe here, nekuti anga ari shamwari yenguva refu. Pfungwa dzangu nemoyo wangu zvinonzwira tsitsi kwaari nekamwana kake panguva ino. '
Anna Kournikova naEnrique Iglesias mucheche musikana mitambo tenesi: Photo
Evan Rachel Wood anokurudzira veGoridhe Globes vanopinda kuti 'vaite denderedzwa rakatenderedza' vanoshusha pabonde
john c. reilly mukadzi
chisimbiso uye heidi klum zvipenyu vana
amai june uye geno vakaroora
Ndiani arnold schwarzenegger mwanakomana
chii chakaitika kutonga brown
ane johnny depp akawedzera uremu